गंग विवशका केही गजलहरु
गजल १. घरी घरी सतार्इरहने तिम्रो वानी राम्रो । मेरो घरमा आईरहने तिम्रो वानी राम्रो । चिसो रातमा मकै बारी कुराएर मलाई, आउँछु भनी पखाईरहने तिम्रो वानी राम्रो । बल्ल तल्ल भेट हुँदा अंगालोमा [पूरा पढ्नुहोस्]
हेलो ! सरकार म जाजरकोट बोल्दैछु (कविता)
हेलो ! सरकार म जाजरकोट बोल्दैछु उहिले ! हो उहीले जहीले तँ पत्थरहरु कोमलता बिहिन भए झै मटु बिहिन थिइस । र लिप्त थिस् सिंहदरबार, शितल निवास बालुवाटार र बानेश्वरमा चवाउदै देशका मांसपेशी र [पूरा पढ्नुहोस्]
मोती जयन्तीको अवसरमा, मुलुकभर विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रम गरी मनाईदै
राष्ट्रिय विभूति युवाकवि मोतीराम भट्टको १५० औँ जन्मजयन्ती मुलुकभर विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदैछ । विसं १९२३ साल भाद्र कृष्ण औँसी अर्थात् कुशे औँसीका दिन जन्मेर विसं [पूरा पढ्नुहोस्]
समीरका केही मुक्तक
केही [पूरा पढ्नुहोस्]
गजल जताततै धाकधम्की लगाउने मात्र भेट्छु यहाँ । चरित्रमा कालो दाग लगाउने मात्र देख्छु यहाँ । उता दोषी यता विरोधी म मझधारमा छु प्रभु, कसैलाई हातले कसैलाई बाउलीले सेप्छु यहाँ । हिड्दा-हिड्दै [पूरा पढ्नुहोस्]
यस वर्षको साहित्य सन्ध्या पुरस्कार कवि श्यामललाई प्रदान गर्ने भएको छ । नेपाली प्रगतिवादी कवितामा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै उनलाई उक्त पुरस्कार दिने निर्णय गरेको साहित्य [पूरा पढ्नुहोस्]
ओइ ! सरकार, गोविन्द केसीलाई मार (कविता)
कविता ओइ ! सरकार, गोविन्द केसीलाई मार हजारौं जनताको बलिदानमा तलार्इ तान्डव नृत्य गर्न नदिने गरिब जनताको अधिकार खोज्दै यो को हो जनता मर्न नदिने ? सरकारै नरहे के को जनता ? माफिया नै नजोगिए के [पूरा पढ्नुहोस्]
त्यस होटलका बाहिर पट्टि मान्छेहरुको ठूलो भीड थियो । मानिसहरु आआफ्नो पालो व्यग्रताका साथ कुरिरहेका थिए । मानिसहरुको त्यस भीडमा वरिष्ठ, चर्चित र देशका चिनिएका मानिसहरु थिए । होटलका भित्र [पूरा पढ्नुहोस्]